Muuri News Network » XOG: C.C.Sharmarke oo bedelay siyaasidiisa kagana dhawaaqaya Muqdisho Qorshe Cajiib ku ah Shacabka
XOG: C.C.Sharmarke oo bedelay siyaasidiisa kagana dhawaaqaya Muqdisho Qorshe Cajiib ku ah Shacabka
Warar aan heleyno ayaa sheegaya in Senator Cumar C/rashiid oo horay u soo noqday Ra’iisal wasaare ayaa sheegaya inuu bedelay siyaasidiisa Dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Senator Cumar C/rashiid oo mucaarad ku ahaa Dowladda ayaa hadda la sheegayaa inuu is bedelay,islamarkaana uu ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho.
Senator Cumar C/rashiid iyo Madaxweyne Farmaajo iney isku soo dhowaadaan waxaa sabab u ah Boqorka Burhaan oo khadka Taleefanka Imaaraadka kula hadlay Cumar C/rashiid kuna amray inuu ka laabto mucaaradka Dowladda kana shaqeeyo horumarka kana tanaasulo xiriirka uu la leeyahay Dowladaha shisheeye gaar ahaan Imaaraadka oo maalgelineysa siyaasiyiinta qaar ee ka horjeeda.
Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa siyaasad ahaan khilaafsanaa Dowladda Farmaajo iyo Ra’iisal wasaare Kheyre,waxaana marar badan hadalo kulul u mariyay warbaahinta,taasi oo sii kicisay cakirnaanta siyaasadeed ee dalka ka jirta.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Cumar C/rashiid marka uu Muqdisho yimaado warbaahinta u sheegay inuu ka tanaasulay hogaamiyenimadii mucaaradka uu ku ahaa Dowladda kana shaqeeyo nidaamka horumarineed ee dalka ka socda.